लहान । पटक पटक भूकम्प आउंने गरेको कारण यहांका मानिस त्रसित भएका छन् । शनिबार बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको ७ दशमलव ६ रेक्टरको ठूलो भूकम्प र त्यसको २४ घण्टा पछाडिसम्म कयौं पटक आएको भूकम्पले त्रसित मधेश पहाड र काठमाडौंका मानिसहरु आफ्नो घर डेरा छाडेर खुला आकसमुनी आश्रय लिएका छन् । खाना, पानी, ट्वाइलेट जस्ता समस्याले बाहिरको बास कष्टकर बनेको छ । यसमा पनि काठमाण्डौंमा बर्षा भइरहेको कारण झन कष्टकर बनेको अवस्था छ । लहान लगायत मधेशका शहरबजारका मानिस खुल्ला एवं स्कूल चौरलगायतको ठाउंमा बास बस्दै आएका छन् ।
उपत्यकाका सबै फराकिला सडक, चौर, सार्वजनिक स्थल, स्कुल सरकारीकार्यालयका प्रांगण सबै भरिएका छन् । टुडिखेलमा मात्र हजारौंले आश्रय लिएका छन् । उनीहरु पाल टाँगेर बसेका छन् । रेडक्रस, नेपाली सेना र प्रहरी सहित अन्य गैर सरकारी संस्थाहरुले आश्रयमा सघाएको छ । पहिलो रात अस्तव्यस्त ढंगले बिताएकाहरुले दोस्रो रातको बसाईलाई पाल टाँगेर ओढ्ने ओछ्याउने व्यवस्थापन मिलाएर थोरै व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मानिसहरु आफ्ना जहान, बालबालिका, वृद्ध वृद्धालाई लिएर खुला चौरमा पुगेका छन् । जताततै खुलास्थानमा पुग्नेहरुको लाईन देखिएको छ । शनिबार राति खुला आकाशमुनी रात बिताएका उपत्यकावासीलाई आईतबार ६ दशमलव ७ रेक्टरको आएको अर्को भूकम्पले थप त्रसित बनाएको हो ।
लहानको पशुपति उच्च मावि, रघुनाथपुर स्कूल, सडक कार्यालयको चोरलगायत विभिन्न खुल्ला ठाउंमा बास बस्न त्रिपाललगायतको खानासमेतको व्यवस्था मिलाएर बसेका छन् । घरको अगाडि सडकमा रात समेत विताउने गरेका छन् । तिनकुनेदेखि माईतीघरसम्मको सडक पेटी र वारमा सर्वसाधारण बसेका छन् । संविधानसभा भवन, सिभिल अस्पताल,सिंहदरवार, नारायणहिटी दरवारको केही क्षेत्र पनि आश्रय स्थलका लागि प्रयोगमा दिइएको छ । सिंहदरवार र नारायणहिटीको पर्खाल भत्किएर पनि आश्रय लिनेहरुलाई सजिलो बनाई दिएको छ । विमानस्थल नजिको गल्फ कोर्ट, तिनकुनेको पार्क, पानीपोखरीको पार्क सबै आश्रय स्थल बनेका छन् । गाडीहुनेहरु गाडीलाई खुला चौर वा सडकमा राखेर त्यसैलाई आश्रयस्थल बनाएका छन् । भारतीय सहित विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति काठमाडौंमा देखिएको छ ।
सैनिक मुख्यालय परिसरमा बसेका हजारौं व्यक्तिलाई सेवा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका पशुपति मारवाडी सेवा समितिका नरेश अग्रवाल प्राकृतिक प्रकोपले धनी गरिब एंव उच्च र नीच भनिएका जातिबीच विभेद हटाएको बताए । ’सब एकै ठाउँमा बसेका छन् सँगै खाएका छन, अग्रवालले भने । समितिले सोमबार बिहान सबैका लागि खानाको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
टुडिखेलमा रामदेवको योग शीविरका लागि ओछ्याएका कार्पेटलाई सर्वसाधारणले पालको रुपमा प्रयोग गरेको संजिव झाले बताए ।
यस्तै, सुखीपुर, सिरहा, गोलबजार, मिर्चैया, राजविराज, कल्याणपुर, विराटनगर, जनकपुर, विरगन्जलगायतको क्षेत्रमा बाहिर खुल्ला ठाउंमा बास बस्न पाल टागेर बसेका छन् ।
उता, बिनासकारी भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन हजार २ सय भन्दै धेरै रहेको पुष्टि भएको छ । सरकारले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार देशभर ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन हजार २ सय भन्दा धेरै पुगेको हो ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा उपत्यका बाहिरका जिल्लामा गरी अहिलेसम्म तीन हजार दुई सय १८ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मिप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै भूकम्प प्रभावित देशभरका विभिन्न ठाउँमा गरी अहिले ६ हजार ५ सय ३० भन्दा धेरै घाइते भएको गृहका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । शनिबार र आइतबार गएको ठूलो भूकम्प तथा त्यसपछि आएका भूकम्पको धक्काका कारण ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा उद्धार तथा राहातको कामलाई तीव्रता दिएको सरकारले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले मृतक परिवारलाई ४० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संचारकर्मीसंग भने,’भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहतस्वरुप ४० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । उनले सर्वसाधारणलाई विपतको घडीमा नआतिकन बस्न आग्रह गरेका छन् । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म मृतकको संख्या २४ सय नाघेको छ । घाइतेको संख्या ६ हजार नाघेका छन् । उद्धार कार्य जारी छ ।
भुकम्पपछि पहिरो,कोशी मार्ग अबरुद्ध
धनकुटा । भूकम्प पछि गएको पहिरोले कोशी राजमार्गको भेडेटार मूलघाट खण्ड अबरुद्ध भएको छ । भेडेटार ४ कार्की छापमा गएको पहिरोका कारण धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा भोजपुर लगायत कोशी पहाडी जिल्लामा यातायात अबरुद्ध भएको हो ।
बिहानसम्म एकतर्फी यातायात संचालन भएपनि माथिबाट फेरी पहिरो खसेपछि यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । सडक विभागको स्काभेटरको सहायतामा नेपाली सेनाले अबरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ । पहिरो खस्नेक्रम जारी रहेकाले यातायात संचालन गर्न केहि समय लाग्ने उप सेनानी सन्तोष उपाध्यायले बताए । कच्ची कर लगायतका संरचनामा सामान्य क्षति पुगेपनि कुनै मानवीय क्षति नभएको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयनारायण मानन्धरले बताए ।
भुकम्पमा समाजिक संजालको सहयोग
लहान । विश्वकै ठुलो जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र चर्चित सर्च इन्जिन गुगलले नेपालमा भएको विनाशकारी भुकम्पमा सहयोग पुरियाउने उद्येश्यले आ–आफ्ना टुलहरु प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले ‘भिजिट सेफ्टी चेक’ र सर्च इन्जिन गुगलले ‘पर्सन फाइन्डर’ नामको टुलहरु प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।
फेसबुकको सेफ्टी चेक टुलले आफु सुरक्षित रहेको खबर अरु आफन्त र साथिभाईसम्म पुर्रुयाउन सहयोग गर्दछ भने, गुगलको पर्सन फाइन्डरले कुनै व्यक्तिको नाम टाइप गरेर सर्च गरियो भने उसको तत्कालिन अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ । यदि कुनै खबर भेटिएन भने व्यक्ति अज्ञात रहेको जानकारी भनेर अप्डेट गराउन मिल्ने सुविधा राखिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले पनि ९८५१२८१३६३ मा निशुल्क एसएमएस गर्न मिल्ने सुविधा प्रयोगमा ल्याएको छ ।
एसएमएस गर्दा कोहि व्यक्ति समस्यामा परेको जानकारी वा आफै समस्यामा परेको भए उक्त नम्बरमा एसएमएस गर्न सकिने छ ।
एसएमएस प्राप्त भएपछि विपद व्यवस्थापनको टोली उद्धार गर्न उक्त स्थानमा पुग्ने छ ।
भुकम्पले पूर्वी मधेशमा पनि क्षति
लहान । भूकम्पले सिरहाको बलान खोला छेउमा जमिन फाटेको छ भने फुलवरियामा जमिन फाटिएर आफैं पानी निस्किरहेको बताइएको छ । सुखीपुरमा कटघरा पल्टिएर क्षति भएको छ भने लहान ३ मा विष्णुदेव साहको घरको छानामा क्षतिग्रस्त भएको छ भने वाल भत्किएर निर्माण कार्य अवरोध रहेको छ । यसैगरी, सप्तरीको राजविराज स्थित रहेको राज रंगशालाको कम्पाउण्ड वाल भत्किएर क्षति भएको स्थानीय विरेन्द्र यादवले बताए ।
उता, आइतबार दिउँसो गएको भूकम्पका कारण रौतहटमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रौतहट औरैया गाविस ७ की ८ वर्षीया रानीकुमारी माझी र रौतहट जटहरा ७ का ६५ वर्षीय शेख हाफिज रहेका छन् ।
भूकम्प आएपछि अत्तालिएर भाग्ने क्रममा पोखरीको डिलबाट खस्दा माझीको डुबेर मृत्यु भएको हो । भूकम्प आएपछि घरबाहिर बसीरहेकाबेला स्थानीयको भागदौड मच्चिएको थियो । बालीका माझी पोखरीमा खसे पनि कसैले उद्धार गरेनन् ।
यसैगरी शेख हाफिज भूकम्प आएलगत्तै डराएर अचेत भएका थिए । घर भित्रै बसीरहकाबेला आत्तिए बेहोस भएका उनको बेहोस अवस्थामै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शनिबार र आइतबार पटक पटक आएका भूकम्पको धक्काले रौतहटमा भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका पौराहीमा अवस्थित ३३ फिट अग्लो महावेको मूर्ति ढलेर क्षतिग्रस्त भएको छ । पौराहीको यो क्षेत्र जिल्लाकै प्रमुख धार्मिक स्थल हो । यसैगरी ४ दर्जन बढी घरमा भूकम्पले क्षति पुगेको छ । स्थानीय घर भित्र जान सकेका छैनन् । उनीहरु खुला चौरमा बसीरहेका छन् । विराटनगरलगायतक्षेत्रमा समेत मानव क्षति भएको छ । यसैबीच शनिबार र आइतबार आएको भुकम्पमा परी पूर्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५० पुगेको छ भने हालसम्म २०५ जना घाइते भएका छन् । शनिबार आएको भुकम्पबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेको संख्या ओखलढुङा र सोलु जिल्ला रहेका छन्। भुकम्पबाट सोलुखुम्बुमा २१ तथा ओखलढुङामा १७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या सुनसरीमा ७, भोजपुरमा २ र ताप्लेजुङमा १ पुगेको छ ।
भुकम्पले सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने सगरमाथा आधार शिविरमा हिम पहिरोले पुरिएको अवस्थामा १७ जनाको शव फेला परेको हो । सुरक्षाकर्मीले सगरमाथा आधार शिविरबाट हिजो र आज बिहानसम्म करिब दुई सयजनाको उद्दार गरेका छन । भुकम्पबाट पूर्वमा घाइते हुनेको संख्या २०५ पुगेको छ । घाइतेहरुमा १२० पुरुष र ८५ महिला रहेका छन् । उनीहरुको पूर्वका बिभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको छ । प्रभावित स्थानहरुमा सदरमुकाम तथा स्थानीय प्रहरी ईकाईहरुबाट प्रहरी टोली खटिगई उद्दार कार्य भईरहेको छ।
भुकम्पको त्रासले तपाईलाई बेचैनी भयो ....यसो गर्नुस्
पटक पटकको भूकम्प का कारण तपाईलाई रिंगटा लागि रहेको छ , वाकवाकी लाग्दै छ ,जतिखेर पनि भुई हल्लिएझै लाग्छ ,खान मन लाग्दैन,बाहिर हिडडुल गर्न मन लाग्छ ,एकैछिनमा बेचैनि बढछ । छोराछोरी र आफन्त सम्झिएर बेचैन हुनुहुन्छ ?
१. खुल्ला ठाउंमा पाल टाग्नुहोस । २. भैमा प्लाईवुड या तख्ताहरु मिलाएर ,राख्नुहोस र त्यसमाथि राडी सुकुल अथवा उपलब्ध चिज ओछ्याउनुहोस । ३. कागति पानी लगातार पिउनु होस । ४. बिरे नुन र कागती हलेको चिया पिउनु होस । ५. बारबार आकाश र भूईतिर नहेरिरहनु होस । ६. घण्टामा दश पटकसम्म लामो श्वास बाहिरभित्र गर्नुहोस ।
७. चिसो पानीले बारबार आप्mनु मुख । धुनुहोस आवश्यक परे नुहाउनु होस । ८. फफूल र जुस सेवन गर्नु होस चिनी कम खानुहोस । ९. पुरक कुम्भक र रेचक का विधिले प्राणयाम गरि रहनुहोस । १०. लामो स्वरमा ॐ कारको उच्चारण गर्नुहोस । ११ . आप्mनो सृंगारका ध्यान दिनुहोस १२. सेता या सामान्य हरिया कपडाहरु प्रयोग गर्नुहोस । १३ . मधुर गीत संगीत र भजनहरु सुनिरहनु होस १४ . बालबच्चा र परिवारका सम्पर्कमा बसिरहनु होस ।१५. शवाशनमा १० मिनटसम्म सुतिरहनु होस ।
आइतबार मध्यान्ह गएको भूइचालोको धक्कापछि विस्तारै धक्का कम हुँदै गएको छ । अमेरिकी भुगर्भ अनुसन्धान केन्द्र (युएसजिएस) का अनुसार नेपाली समय मध्यान्ह १२ बजेर ५६ मिनेटमा ६ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूइँचालो गएको भूइचालोको धक्काहरु विस्तारै कम हुँदै गएको छ । अब ठुलो भुकम्प नआउने सानोतिनो भूकम्प भोलि ३ बजे सम्म जाने त्यसले कुनै असर नगर्ने हुदा अमेरिकी भुगर्भ्विदले नआतिकन ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरेका छन्
भारतीय फिर्तामा तादुरुकता,फेरी झट्का
भारतले भुकम्पपछि नेपालभित्र रहेका र बचाव कार्यमा जुटेका छन् । साथै भारतीय राहत एवं बचाव दल नेपालमा फंसेका भारतीयहरुलाई पनि बाहिर निकालिरहेको छ । नेपाल सरकारलगायत अन्य देशका सुरक्षाकर्मी सक्रिय रहेको जानकारीमा आएको छ ।
यता, भारतको प्रभावित क्षेत्रमा पनि राहत र बचाव अभियान तिब्र पारेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म भुकम्पमा ३२ सय भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । भारतले यसमा १३ सैन्य र ३ सिविल एयरक्राफ्ट पठाएको छ । जसमा ५४० भारतीयको फिर्ता लगिएको छ । जबकि आइतवारको २३७ को काठमांडूबाट दिल्ली लगेको छ ।
यसैबीच,शनिबार मध्याहृनपछि आएको भूकम्पको धक्का आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । आइतबार मध्याहृन फेरि भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । लगातार भूकम्पको धक्का महसुस भइरहका कारण मानिसहरुको जनजीवन आतंतिक बनेको छ ।
काठमाण्डौंमा ज्वालामुखी निस्कन सक्ने
काठमाडौंको ईमाडोलमा जमिन मुनिबाट बालुवासहितको पानी निस्किएको छ । लगातारको भूकम्पपछि, त्यस क्षेत्रमा ज्वालामुखी निस्किन सक्ने हल्लाले स्थानीय बासिन्दा थप त्रसित बनेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाको बारीको जमिन चिरिएर भित्रबाट बालुवा र पानी बाहिर निस्किएको छ ।
१० रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा ज्वालामुखी जानसक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । यसबारेमा थप पुष्टि हुन बाँकी छ ।
11138627_881101585284648_6036598381936814712_n.jpg (31 KB) Download
ten ma bas.jpg (27 KB) Download
11182124_464947253655568_1014775590542975007_n.jpg (15 KB) Download